Volamena: nidina ho 120.000 Ar ny graman’ny 18 carats | NewsMada
Volamena: nidina ho 120.000 Ar ny graman’ny 18 carats
Nidina ny vidin’ny volamena amin’ny ankapobeny. Anisan’ny antony ny havitsian’ny mpanjifa, sady nisy ilay 73,5 kilao tany Afrika Atsimo rahateo.
Anisan’ny ahitana mpividy volamena tsy manara-dalàna ny etsy Analakely. Niray feo ireo nanontaniana, fa nihavitsy ny olona mitondra volamena amidy amin’izy ireo ka nidina ihany koa ny vidiny. Lasa 45.000 Ar ny andraisana ny 1 grama, amin’ny karazana 9 carats, ary 120.000 Ar ny 18 carats raha mbola 300.000 Ar, ny volana septambra 2020.
Firavaka ny ankamaroan’ny entin’ny olona amidy eny Analakely, vitsy kosa ny mivarotra vovo-bolamena. Nambaran’ny mpividy iray tsy nitonona anarana eo Analakely fa efa misy mpanangona ny ankamaroan’ny vovo-bolamena any amin’ny toeram-pitrandrahana any ambanivohitra ireny. Misy mpandraharaha matanjaka indray avy eo mividy azy aty an-tanàn-dehibe.
Nanamafy ity fihenan’ny mpanjifa ity ny mpanefy firavaka iray eny Anjanahary. Aminy, anisan’ny antony mety nahatonga izany ny fandrarana ny fanondranana volamena any ivelany, nanomboka ny oktobra 2020. Eo koa ilay volamena milanja 73,5 kilao tratra tany Afrika Atsimo farany teo. Nidina rahateo ny vidin’ny volamena eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, 1.500 euros ny 1 grama.
Handraisana fepetra etsy Analakely
Raha ny antontanisa ofisialy, nahatratra 177 kilao ny volamena novidin’ny Banky foiben’i Madagasikara, nanomboka ny tapaky ny desambra 2020 teo. Manodidina ny 500.000 ny mpitrandraka volamena manerana ny Nosy, nefa ny 3.000 monja no manana taratasy ara-dalàna. Ho an’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany, mila ampidirina amin’ny ara-dalàna izy ireny ary anisan’izany ireo mpividy eo Analakely ireo.
Efa natsangana ny Antokon-draharaha misahana ny volamena (Anor) hiandraikitra izany ary hiara-kiasa amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny minisitera, handray ny fepetra.
Anisan’ny sehatra tsy ara-dalàna hita etsy Analakely koa ny mpividy sy mpivarotra vola vahiny, tokony handraisana fepetra hentitra.